Karatra HTML sy CSS 27 isan-karazany amin'ny eCommerces, bilaogy ary maro hafa | Famoronana an-tserasera
Saika tsy manam-petra ny loharanon-karena an-tserasera, fa ny fahitana azy ireo manana kalitao no tena zavatra sarotra, na dia mitady kely aza ary manana lisitra tsara momba ny tranonkala natokana ho an'ny famolavolana, dia nanjary mora kokoa ilay zavatra. Amin'ny fotoana tena milamina tsara ny fiteny toa ny HTML sy CSS, ny fanakaikezana ireo loharano maimaimpoana maimaimpoana dia saika hidina vitsivitsy.
Handahatra andian-dahatsoratra isika karatra maimaim-poana amin'ny HTML sy CSS mety tsara amin'ny karazana bilaogy, orinasa, e-varotra ary maro hafa. Fanangonana lava be mba hahafahana mampiditra azy amin'ny asa sasany ataonao ho an'ny karazana mpanjifa rehetra. Hataonay amin'ity lisitra ity izay mampiasa codepen.io hahafahanao mahazo ny kaody amin'ny HTML sy CSS.
1 Fahafinaretana amin'ny Karatra bilaogy # 1
2 Ny CSS News Cards dia CSS fotsiny
3 Lahatsoratra bilaogy
4 Karatra bilaogy
5 Karatra fandraharahana mamaly
6 Karatra bilaogy iray hafa
8 Karatra fandraharahana 3D
9 Karatra fandraharahana CSS
10 Karatra grids
11 Karatra 3D naseho
12 Karatra famolavolana fitaovana mamaly
13 Taratasy karatra Flexbox
15 Karatra slide ho an'ny eCommerce
16 Famoronana endrika - Karatra vokatra
17 Karatra vokatra
18 Karatra vokatra malefaka
19 Karatra Flip
20 Karatra ho karatra vokatra 3D
21 Karatra Parallax
22 Hover effet ho an'ny karatra
23 Fihetseham-po tsotra
24 Karatra halalin'ny Paralaks
25 Karatra UI ho an'ny sarimihetsika
26 Karatra mombamomba
27 Karatra fonosana Polaroid
Fahafinaretana amin'ny Karatra bilaogy # 1
Una karatra famolavolana tena tsara izay milaza fa saika ny sary rehetra maneho azy dia afaka mandeha any amin'ny codepen.io ianao hahazoana ny kaody mifandraika ary hametraka azy eo amin'ny tranonkalanao.
Ny CSS News Cards dia CSS fotsiny
Ity karatra ity, miaraka amin'i Zavatra hafahafa toy ny any ambadika, miavaka amin'ny maoderina malama izay manambara ny atiny. CSS madio io.
Topi-maso ny tranonkala amin'ny alàlan'ny fitondrana ny totozy totozy eo amboniny. Manana CSS sy HTML izy io ho fampidirana mora.
Famolavolana karatra bilaogy minimalista mamaly. Sarimiaina haingana sy malefaka kalitao avo lenta izay tsy mamela ny olona tsy hiraharaha.
Karatra fandraharahana mamaly
Mijoro eo ny sary mihetsika kely amin'ny alàlan'ny fametahana ny tondro totozy amin'ny sarin'ny karatra.
Karatra bilaogy iray hafa
Miseho ny soratra karatra rehefa mandehandeha mitovy amin'izany.
Una karatra tsotra nefa ankehitriny tsidiho miaraka amin'ny demo sy kaody amin'ny HTML sy CSS.
Sarobidy ity karatra ity sary mihetsika 3D misy HTML sy CSS. Namboarin'i Elena Nazarova, dia mety tsara amin'ny karatra fandraharahana manaitaitra loko.
Karatra fandraharahana CSS
Karatra fandraharahana manaitra amin'ny CSS izay mihodina amin'ny 3D hanome lalana ny andiana adiresy URL izay mamaly ny tondro ny totozy amin'izao fotoana hametrahantsika azy izao.
Karatra andiany maromaro napetraka miaraka amin'ny volavola mahaliana. Mahagaga ny hatsarany manatsotra azy, nefa miaraka amina marika tsara amin'ny kaody HTML, CSS ary SCSS.
Karatra 3D naseho
Ity andiana karatra grids ity ambarao vaovao misimisy kokoa amin'izao fotoana izao namela ny totozy teo amin'ny kisary maitso izahay. Mandritra ny fotoana ialantsika ny tondro, dia mihetsika mifanaraka amin'izany ny sisan-tsarimihetsika.
Karatra famolavolana fitaovana mamaly
Miaraka amin'ny fiteny famolavolana google, ity andiana karatra ity dia miseho izay misongadina amin'ny kisary menio izay manokatra ny fampahalalana rehetra an'ireo mpilalao tahaka ny tranga ohatra. Sarimiaina tsara tarehy sy kanto miaraka amin'ny fisehoana an-tsary mahafinaritra.
Taratasy karatra Flexbox
Prototype ny karatra amin'ny haavo mitovy miavaka amin'izy ireo amin'ny fampiasana ny endrika reflexe grid. Ny iray amin'ireo soatoaviny dia ny fampiasana ny tahan'ny CSS sy ny sivana CSS.
El lalao finday malaza manana ny karatra misy azy amin'ny HTML sy CSS noforonin'i Andre Madarang. Azontsika atao ny mamaky eo anelanelan'izy ireo amin'ny sary mihetsika mazava sy tena hita maso.
Karatra slide ho an'ny eCommerce
Miaraka amin'ny sary mihetsika masiakaMamporisika anao ireo karatra ireo hikaroka ireo singa ao aminy hahalalana hoe inona izany. Miaraka amina endrika tsara avy amin'i Omar Dsoky.
Famoronana endrika - Karatra vokatra
Karatra tonga lafatra hamolavolana ireo vokatra an'ny eCommerce anay. Namboarina tamin'ny HTML sy CSS.
Karatra vokatra malefaka
Araka ny anarany, mampiasa flexbox mamorona sary mihetsika mahaliana rehefa tsindrio ny bokotra add to cart.
Kaody kely ho an'ny karatra sasany miaraka amin'ny malama sy sarimiaina tonga lafatra. Afaka minitra vitsy dia azonao atao ny mampiditra azy ireo. Nampidirina tato amin'ny codepen.
Karatra ho karatra vokatra 3D
Marihina fa ireto karatra ireto dia toy ny hoe manana andiana karatra ambony latabatra izahay. Ny tondro dia tavela ary manalalaka izy ireo, tsindrio ny tsirairay ary asehoy ny aorian'ny karatra mba hampisehoana ny mombamomba ny vokatra. Tsindrio indray ary apetrakao toy ny teo aloha. Tonga lafatra amin'ny fianarana fananana CSS 3D.
Fanandramana tena hita maso miaraka a effet flip manintona. Aleo ianao mahita azy io hahafantatra izay lazainy.
Hover effet ho an'ny karatra
Vokany tsotra nefa gimmicky hover momba ny karatra.
Vokatry ny manaitra kokoa, saingy misy fiatraikany lehibe izany amin'ny fotoana itiavantsika azy.
Karatra halalin'ny Paralaks
Ireo karatra ireo dia mitondra ny parallax hevitra an-tampony mamorona karatra manaitra sasany amin'ny famolavolana. Mila mahita azy fotsiny ianao mba hahalalana bebe kokoa ny vokany vokarin'ny mpampiasa rehefa misafidy sokajy sasany ao amin'ny bilaoginay ianao.
Karatra UI ho an'ny sarimihetsika
Karatra iray an'ny layout tsara vita amin'ny HTML ary CSS.
tena sarimiaina tsara ho an'ny karatra fifandraisana izay ahafahantsika mampihatra ny fidirana amin'ireo mombamomba ny media sosialy. HTML sy CSS.
Karatra fonosana Polaroid
Miaraka amin'ny fananana, sivana ary Tetezamita manokana CSS Ity andiana karatra misy vondrona Polaroid ity dia noforonina; aza adino ireo tranonkala sary SVG ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » CSS » Karatra HTML sy CSS maimaimpoana 27 ho an'ny bilaogy, e-varotra sy maro hafa
Azo atao ny mampiditra ireo karatra rehetra ireo amin'ny pejy misy wordpress